Ogaden News Agency (ONA) – Wareysi lala yeeshay Wariyashi ree Sweden Saaka subaxdi SVT
Wareysi lala yeeshay Wariyashi ree Sweden Saaka subaxdi SVT
Wariyaasha Ree Sweden ayaa saaka saacad ka hor lagawareystay Barnaamijka Subaxdi kabaxa SVT ee Gomorron Sweden (Subax Wanaagsan ree Sweden) Waxaa la su’alay siday u arkaan xoriyadooda kadib 14 bilood ay xabsi ku soo qaateen jeelka Ethiopia.
Wariyaasha ayaa si dhib yar uga jawaabey oo sheegay in Xasbigoodi ay ku soo qaateen Jeelka Ethiopia waa arrin lama illaawaan ah oo maahan arrin wax tar la’aan ah wax badan ayaa kasoo faa idnay jeelki. run ahaanti waxii aan u tagnay Ogadeniya ama Ethiopia waa gaadhna.
Ujeedadi aan u tagnay Ogadneiya waan gaadhnay waayo mudadii aan xidhnayn qodobadi aan rabnay in laga doodo oo dhan waa laga dooday warbaahinta caalamka oo dhan waxay sheegtay u jeedada aan u tagnay Ogadeniya, waxii aan anagu soo dawaci laheyn caalamkana u sheegi lahayn waaba noo hirgashay. Sidaas awgeed jeelka aan ku jirnay bilaash muusan ahayn.
Johan ayaa wareysigan u sheegay SVT inay adagtahay inaad durbaba la qabsato nolosha caadiga marka la eego waxa aan soo marnay waqti ayay qaadanaysa inaan noloshi caadiga aheyd kusoo laabano. Dhibki aan soo marnay hada waa wax lasoo dhaafay taarikhdayada ayay galaysa horey ayaana uga soconayna.
Shibbye ayaa isna wareysigan ku sheegay inay hadda ku howlanyihiin aqrinta waxyaalihi laga qoray mudadii ay xabsiga ku jireen. Guri dhan ayaa ay buuxisay waxii lanaga qoray waqtina waan u helnay aan ku murajacoona si aan u aqrino. Mudadii aan xabsiga ku jirnay waxaad mooda in wax badan lanaga qoray, xidhaygayagu bilaash iyo maala yacni ayuu noqon lahaa haddii banaanka xogtayada la keeni lahayn oo warbaahinta laga aamusnaan lahaa.
SVT ayaa wada barnaamijyo isdaba joog ah oo qadiyada Ogadeniya iyo xidhayga wariyaasha looga hadlayo heer waligeed qadiyada Ogadeniya looga hadlina wadankaas Sweden gaadhsiisay. Midaas oo hada ree Sweden si fiican u barteen dowlada Ethiopia iyo xasuqa ay shacabka Ogadeniya ku heyso.